एनआईसी एसिया बैंकका सेयरधनी एक बर्षमा मालामाल ! - Arthasansar
विहीबार, १५ माघ २०७७ | Thursday, January 28, 2021 IPO Result
एनआईसी एसिया बैंकका सेयरधनी एक बर्षमा मालामाल !
आइतबार, १९ पुस २०७७, १३ : १३ मा प्रकाशित
सन् २०१९ को अन्तिम सम्ममा एनआइसी एसिया बैंकको सेयरमा लगानीगर्ने लगानीकर्ताहरु अहिले मालामाल भएका छन ।
बैंकको सेवा तथा ब्याजका बिषयमा बिभिन्न विवादहरु आउने गरेको छ । बैंकबाट ऋण लिने र मुद्दतीमा पैसा जम्मा गर्नेहरुको पिडा बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जाल देखिने गरेको भएतापनी यस बैंकको सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु लाई भने फलिफाप भएको छ ।
सन् २०१९ को अन्तिम दिन ४१३ रुपैयाँमा कारोबार भएको बैंकको सेयर मूल्य आज सम्म आइपुग्दा ९०० रुपैयाँ नाघिसकेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा यो बैंकको सेयरमा आएको उछाललाई हेर्दा यसको बृद्धिदर अहिले नै रोकिने छाटकाट देखिदैन ।
यो एक बर्षमा यो बैंकका लगानीकर्ताहरुले लगभग प्रतिसेयर ५०० रुपैयाँ आम्दानी गरेकाछन् । एक बर्ष अघि ४१३ रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताको सेयरको मूल्य ९०० रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो एकबर्षमा लगानीकर्ताहरुले लगानीको ११८ प्रतिशत प्रतिफल पाएका छन् जसमा यसबर्ष पाएको बोनस समावेस गरिएको छैन ।
यो बाहेक बैैंकका सेयरधनीहरुलाई गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट १९ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भइसकेको छ ।
जस्तो एक बर्ष अघि बैंकको १०० कित्ता सेयरमा ४१३०० रुपैयाँ लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुको पुँजी अहिले बोनस सेयर सहित १ लाख ७ हजार १०० रुपैयाँ पुगेको हो । सेयरमा गरेको ४१ हजार ३०० रुपैयाँको लगानीले लगानीकर्ताहरुर्ला एक बर्षमै ६५ हजार ८०० सय रुपैयाँ बराबरको मुनाफा दिएको हो ।
यो एक बर्षमा नेप्से करिब ९० प्रतिशतले बढ्दा एनआईसी एसिया बैंकको सेयरमा लगानी गर्ने हरुले भने १५९.३२ प्रतिशत नाफा कमाएका छन् ।
अनलाइनबाट एनआईबिएल एस क्यापिटलमा डिम्याट खाता र मेरोशेयर दर्ता गर्न सकिने
किन उचालिँदै छ सेयर बजार ? यस्ता छन् कारण
प्रधानमन्त्री सहित सबैलाई स्वयंम उपस्थित भई लिखित जबाफ पेस गर्न अदालतको आदेश
घलेम्दी हाइड्रोको पाँचौ र छैठौं साधारणसभा सम्पन्न
निफ्राको आइपिओमा लगानीकर्ताको लर्को, धेरै कित्ता पाउने संभावना घट्दै ,कति पर्यो आवेदन ?
६ महिनामा ३२ अर्बको डिजेल आयात,के भयो धेरै निर्यात ?
यो बर्ष जारी भएका आईपिओमा कुन कम्पनीमा कति पर्यो आवेदन ?
एमसीसीबारे वारपार नगरे दैनिक अरबौंको विजुली खेर जान्छः टोपबहादुर रायमाझी
निफ्राको आईपिओः ५० कित्ता सम्म आवेदन दिने सबैले पाउने,६० कित्ता पाउने भाग्यमानी कति ?
महिला लघुबित्तले पायो आईपिओ निष्काशनको अनुमति
सानिमा बैंकको ओरालो यात्रा सुरु
नेप्सेमा उच्च कारोबारको रेकर्डः कुन–कुन कम्पनीमा देखियो लगानीकर्ताको आकर्षण ?
निफ्राको आइपिओको 'प्रि अलोटमेन्ट' आज हुँदै, बाँडफाँड कहिले ?
शुक्रबारबाट सबै आवेदक (निफ्रा)का मालिक,आइपिओ बाँडफाँड बिहान १० बजे सुरु हुने !
नेप्से दोहोरो अंकले बढ्दा किन भए यी कम्पनीका लगानीकर्ता निराश ?
नेप्सेमा ८४ लाख १७ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत